Xogta Isku-dhafka ayaa si sahlan u shaqeynaya
Marka raadiyeyaasha webka ay isticmaalaan qalabkani waxay ku dhisi karaan qulqulo si ay u awoodaan inay u socdaan goobta. Iyadoo la adeegsanayo xulashooyin kala duwan, shabakadda shabakada waxay u dhexeeysa kartaa websaydhka si loo helo xog qaar, sida liisaska, sawirada, waxyaabaha, iyo miisaska. Si gaar ah, markasta oo khariidadku ka furto bog ka mid ah boggaga internetka, dadka isticmaala waa inay soo uruuriyaan qaar ka mid ah qaybaha. Si aad sidaas u yeelatid, waa inay ku dhejiyaan khariidadda adoo dooranaya 'Scrape'. Haddii ay doonayaan in ay joojiyaan nidaamka u dhexeeya, waxay kaliya ay leeyihiin inay xiraan daaqadan, oo waxay haysan karaan xogta la soo saaray. Ka dib, xogta la xoqay ayaa loo dhoofin karaa qaababka CSV.
Tani xoqidda xogta r waa mid aad u fudud, wax ku ool ah, iyo qalab wax soo saar leh oo adag. Waxay bixisaa faa'iidooyin qaar ka mid ah, soo-ururinta xogta oo akhrin karta qaab-dhismeedka xogta, sida liiska xiriirka, qiimaha, badeecada, emails iyo si ka badan.
Qaadista Bogag Dhibco ah oo Isticmaalaya
Diyaarso soo bandhigid farsamooyin farsamaysan oo loogu talagalay dadka isticmaala si ay u awoodaan inay u xakameeyaan habka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee xogta ay u lumeen. Si loo soo saaro macluumaadka boggaga internetka badan, waxaan isticmaali doonaa nidaam laba tallaabo ah:
Ugu horreyn, waxaan heli doonaa dhamaan URL-yada bogagga shabakadaha leh kordhinta xoqidda , ka dibna waxaan macluumaadka ka soo saari doonaa boggaan internetka iyadoo la isticmaalayo Refine. Haddii bogagga internetka ay rabaan inay xog ururiyaan si ay u siiyaan xiriirro bogagyo kale oo la mid ah, raadiyeyaasha webka waxay isticmaali karaan farriin si ay u raacaan bogga xiga. Isticmaalayaasha ayaa sidoo kale isku dari kara istiraatiijiyado dhowr ah si ay u awood u yeeshaan inay ku foorarsadaan oo ay ku gurtaan boggag kala duwan. Tusaale ahaan, waxay soo saari karaan liistada URL-yada si ay u xoqaan oo ay u foorarsadaan natiijooyinka Source .